Cudur dilaacay | November 2019
Ugu Weyn Ee Cudur dilaacay
7 noocyada ugu fiican ee pheasants
Sanado badan ka hor, dadka deggan tuulooyinka ku dhow Wabiga Phasis ee Giriiggii hore ayaa bilaabay inay guri ku dhuftaan shimbiro aad u qurux badan, hilibka taas oo dhadhan weyn leh. Waxaa la rumeysan yahay in naxdida ay magaceeda ka soo qaadatay magaca webiga Shabeelka, oo u dhow kuwaas oo markii hore lagu soo guray guriga. Soomaliyayaashu waa wakiillada ugu weyn ee Digaagga Digaagga.
Qalabka dahabka ah ee guriga: sida loo abuuro iyo sida loo quudiyo
Kuwa bilowga ah, taranka taranka ee guriga ayaa u muuqda mid aad u shaqeynaya oo aan had iyo jeer ahayn geedi socod lagu guuleysto. Laakiin dhab ahaantii, shimbirkan quruxda badani maaha kuwo ka duwan digaagga caadiga ah, waxayna dareemeysaa weyn sanadka oo dhan wareega hawada furan. Sida loo xakameeyo jaahwareeraha jiilaalka nabdoon ee xaaladaha cimilada adag, waxa la quudiyo, sida looga hortago geerida iyo korinta dhalidda yar - waxaan ka sheekeyn doonaa dhammaan arrimahan dambe ee maqaalkan.
Noocyada cad: waxay u eg yihiin, meesha ay ku nool yihiin, waxa ay cunaan
Xaqiiqooyinka dhabta ah ee shimbiraha qotada dheer, qashin cad ayaa noqon kara quruxda dhabta ah ee dayrka, sababtoo ah, marka laga reebo muuqaalkiisa soo jiidasho leh, waxaa lagu kala duwan yahay nimcadiisa iyo fududeyn isbarbardhiga ah ee daryeelka. Muxuu sameeyaa miisaanka cad ee loo yaqaan 'white pods'? Sida badan beeralayda digaaga ayaa doorbidaya noocyada kala duwan sababtoo ah midabkiisa midabka ah, iyo xaaladaha wanaagsan ee haysashada duufaanta mar walba waxay noqoneysaa caddaan cad.
Dhacdooyinka soo noqnoqda: sharax, sawir
Qodobbada la soo gudboonaatay waxaa loo tixgelinayaa inay yihiin wakiillada ugu weyn ee noocooda ah, iyo kuwa kale ee la shaqeeya waxay u taagan yihiin muuqaalkooda aan caadiga ahayn. Qurxafku ma aha oo kaliya moolka midabka, laakiin sidoo kale qaab dhismeedka jirka. Waa maxay sifooyinka shimbiraha, waxa ay u taagan tahay daryeelka iyo dayactirka - sii bartaan maqaalkan.
Tartanka Royal: waxa ay u eg tahay, meesha ay ku nooshahay, waxa ay ku quudineyso
Xabaaluhu waa shimbiro qurux badan oo qurux badan, laakiin, nasiib daro, quruxdoodu waxay u noqdeen kuwo wax burburiya. Ugaarsiga loogu talagalay pheasants ayaa muddo dheer ku jiray rikoodhka ugu caansan, sababtoo ah bahdilayaasha waxaa soo jiidatay ma aha oo kaliya miro qurux badan, laakiin sidoo kale rajo ah cunista cunta delicious. Qaar ka mid ah xayawaanka ayaa horeba aad u yaraa, dadkuna waxay bilaabaan inay ka fekeraan tarankooda.
Cunto caadi ah: waxa ay u eg tahay, meesha ay ku nooshahay, waxa ay cunaan
Maanta waxaan ka hadli doonaa qaylada - shimbir, taas oo ah shay aad u jecel, iyo calaamada South Dakota ee Maraykanka. Shimbirkan quruxda badan ee quruxda badani waa qaraabo digaag caadi ah oo sidoo kale wuxuu dareemayaa in uu wanaagsan yahay beerta beerta. Meelaha aan deganahay, xayawaanka duurjoogta ah iyo kuwa qoyanba waxay u egyihiin muuqaal, laakiin waxaa suurtogal ah in ay halkaan ku dhaliyaan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cudur dilaacay 2019